Okwu si Amazon ikwughachi na-amalite ịchị onwe ha ọchị n'ihi enweghị ihe kpatara kpatara | Akụkọ akụrụngwa
Okwu okwu Amazon na-amalite ịchị onwe ha ọchị n’enweghị ihe kpatara ya
Na njedebe, ọtụtụ sitere na ndị ọrụ hụrụla etu ndị na-ekwu okwu Echo Amazon yana ngwaọrụ ndị enyemaka Amazon, Alexa, jikwaa. ebidola ịchị onwe ha ịchị onwe ha n’enweghị ihe kpatara ya, na-enweghị onye ọrụ rịọrọ ya n'oge ọ bụla ma ọ bụ tupu ajụjụ ọ bụla n'aka ndị ọrụ ya.
Dị ka Amazon si kwuo na Verge "Anyị maara nke a ma na-arụ ọrụ iji dozie ya." Mana dị ka ụlọ ọrụ Jeff Bezos si kwuo, azịza ya bụ iji gbanyụọ ahịrịokwu ahụ "Alexa ọchị" na-agbanwe ya ka «Alexa, i nwere ike na-achị ọchị? Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, ahịrịokwu a anaghị adịkarị mfe ịgha ụgha.
Nke a pụtara na Alexa software ga-abụkarị ewekarị na-agbagwoju anya ọtụtụ ndị na-eji okwu na nkebi ahịrịokwu na-ada yiri ndị na "na-amanye" Alexa na-achị ọchị. Mana ọ dị ka - gbanwee iwu olu dị mkpa iji mee ka ọchị Amazon, Ọ gaghị ezuru ma eleghị anya ị ga-akwụsị ịme ya site n'ịgbanwe azịza gị na "O doro anya, enwere m ike ịchị ọchị" kama ịmalite ịchị ọchị na-atọtụ ọchị, dịka anyị ahụla n'ọtụtụ vidiyo YouTube ndị ebugoro.
Igha ụgha na akwa banyere ịrahụ ụra mgbe Alexa na Amazon Echo Dot na-ahapụ oke ọchị na ọchị ọchị laugh enwere ezigbo ohere m ga-egbu n'abalị a.
- Ikea Ukwuu (@onyedieghe) February 26, 2018
Ndị ọrụ izizi malitere ịkọ akụkọ ahụ, ha chere na ọ bụ onye dị adị na-achị ọchị n'akụkụ ha, nke kpatara nsogbu ụfọdụ na ụfọdụ ndị mgbe ha kwenyere na mmadụ zoro ezoro n'ụlọ ha, ọkachasị nke ndị bi na anyanwụ. Ihe ka ọtụtụ n’ime ha kwụsịrị ịmịpu ngwaọrụ ha jikwaa Alexa.
Ọtụtụ ndị ọrụ ekwuola na ọchị na-echetara ha HAL 9000, kọmputa 2001 Space Odyssey, kọmputa nke kwupụtara ebumnuche ya igbu ọchụ. Ọzọkwa, ụda olu e ji mee ihe adịghị agba ume. Nke a nwere ike ịbụ akara ngosi izizi na ijikọ igwe amamịghe n'ụlọ anyị bụ ihe mbụ a ga - eme iji nweta ọdịnihu dystopian ebe amamihe dị iche iche ga - achịkwa anyị kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Okwu okwu Amazon na-amalite ịchị onwe ha ọchị n’enweghị ihe kpatara ya
Jon Favreau iji dee ma mepụta usoro Star Wars
NASA na-enye nkọwa ọhụrụ nke ekwupụtabeghị banyere Jupita